सबैरै बिहान उठेर जिम, योग र एक्सरसाइज जस्ता फिजीकल एक्टिविटी गरिन्छ । तर, शरीरको साथसाथै दिमागको पनि काम गराउनु आवश्यक पर्छ । शरीरका अंगलाई जति चलायमान गराउनुपर्छ त्यत्ति नै दिमागलाई पनि ताजा राख्न...
मस्तिष्काघातबारे डा. गंगोल : धुम्रपान र मद्यपान सकेसम्म त्यागौं
मस्तिष्काघात पूर्व संकेतहरु बिना नै शरीरमा आक्रमण गर्ने प्राणघातक रोग हो । चिकित्सकहरु मादक पदार्थ सेवनपछि दिमागलाई भार पर्ने काम गर्नाले मस्तिष्काघात जस्ता डरलाग्दा रोगहरु लाग्ने गरेको बताउँछन् । ...
ब्रेन स्ट्रोक : कसलाई, किन र कसरी हुन्छ ?
पक्षघात अर्थात ब्रेन स्ट्रोक दिमागको कुनै भागमा रक्त सञ्चार बन्द हुनु अथवा कम हुनाको कारण हुन्छ । दिमागमा अक्सिजन तथा पोषक तत्वहरुको कमी हुनाले ब्लड भेसल्स अर्थात रक्त बाहिकाहरुका बीचमा रगत जम्नाले...